Ngabe udinga ummeli wedivosi ozokusiza mathupha?
Kuwo wonke umuntu, isehlukaniso singumcimbi omkhulu. Kungakho abameli bethu besahlukaniso besenkonzweni yakho ngezeluleko zabo. Isinyathelo sokuqala isehlukaniso ukushaya ummeli wedivosi. Isehlukaniso sithethwe yijaji futhi kungummeli kuphela ongahambisa isicelo sesehlukaniso enkantolo.
UNGADINGA USIZO NGOKUGCINA KWAKHO?
SICELA UXHUMANISE IMITHETHO YETU YOKUGULA
Kuwo wonke umuntu, isehlukaniso singumcimbi omkhulu. Kungakho abameli bethu besahlukaniso besenkonzweni yakho ngezeluleko zabo.
> Abameli bethu besahlukaniso bayakweseka
> Ukuqokwa nommeli wedivosi? Le ndlela ulungiselela ngayo!
> Imininingwane mayelana nokuqokwa
> Imiphi imibhalo okufanele ngiyilethe?
> Inkampani eyakho nesehlukaniso
> Indlela yomuntu siqu nesiqondisi
Isinyathelo sokuqala isehlukaniso ukushaya ummeli wedivosi. Isehlukaniso sithethwe yijaji futhi kungummeli kuphela ongahambisa isicelo sesehlukaniso enkantolo. Kunezici ezahlukahlukene zomthetho zokuqulwa kwamacala kwesehlukaniso lapho ijaji lizokhipha isinqumo. Izibonelo zalezi zinto ezisemthethweni yilezi:
• Ngabe izimpahla zakho ezihlangene zisatshalaliswa kanjani?
• Ngabe umlingani wakho wangaphambili unemfanelo yengxenye yempesheni yakho?
• Kuthiwani ngemiphumela yentela yesehlukaniso sakho?
• Ngabe umlingani wakho unelungelo lokuhlangana ne-alimony
• Uma kunjalo, liyini inani le-alimony ngenyanga?
• Uma unezingane, zisingathwa kanjani izindaba eziphathelene nezingane?
• Kuxhaswa kanjani ukusekelwa kwengane?
Abameli bethu besahlukaniso bayakweseka
Kunezici ezithile ekuxazululeni isehlukaniso. Ummeli wedivosi ovela Law & More ingakusiza futhi ikuqondise ekuhleleni lezi zici ngangokunokwenzeka. Abameli bethu basebenza emkhakheni wezomthetho womndeni. Ngabe unelukuluku lokuthi singakwenzela ini? Ngemuva kwalokho ngicela uthinte Law & More.
Kungani ukhethe Law & More?
Law & More Uyatholakala ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu
kusukela ngo-08: 00 kuye ku-22: 00 futhi ngezimpelasonto kusuka ngo-09h00 kuye ku-17: 00
Ukuxhumana okuhle nokusheshayo
Abameli bethu balalele udaba lwakho bese beza
ngecebo elifanelekile lokwenza
Indlela yomuntu siqu
Indlela yethu yokusebenza iqinisekisa ukuthi ama-100% amakhasimende ethu asincoma nokuthi sikalwe ngokwesilinganiso nge-9.4
Abameli bethu besahlukaniso banendlela yomuntu siqu futhi bazosebenza nawe ukuthola izisombululo ezifanelekileyo ngekusasa. Sibheka zonke izici zomthetho futhi silwela ukuzuza umphumela ongcono kakhulu ongawathola.
Izihloko esingakusiza ngazo yilezi:
• Isivumelwano sesehlukaniso;
• Uhlelo lokukhulisa izingane;
• Ukusatshalaliswa kwezimpahla ezihlanganisiwe;
• I-alimony yezingane;
• I-alimony yozakwethu;
Amalungelo ezingane zokufinyelela;
• Imiphumela yezimali.
Ukuqokwa nommeli wedivosi? Le ndlela ulungiselela ngayo!
Wena nomlingani wakho nisithathile isinqumo. Uthola isehlukaniso. Kepha yini elandelayo? Isinyathelo sokuqala esibalulekile ngemuva kwalesi sinqumo esisekude ukubiza ummeli wedivosi. Ngemuva kwakho konke, lapho isehlukaniso sixazululwa, hhayi nje kuphela izinto eziwusizo ezivelayo kodwa nezingokomthetho kuphakama: Kuzokwenzekani ngendlu yakho ehlanganyelwe kanye nokubuyiselwa kwemalimboleko, ngokwesibonelo? Ngabe kuzohlukaniswa kanjani ukwabiwa kwemali yakho nama-akhawunti wasebhange? Futhi ubani ozonakekela ukunakekelwa kwezingane zakho nsuku zonke noma kwezezimali? Ukuze ukwazi ukukusiza ngangokunokwenzeka ngokuhlela futhi urekhode zonke izingqinamba ezingokomthetho eziphathelene nesehlukaniso, kubalulekile ukuthi ummeli wakho wedivosi abe nayo yonke imininingwane edingekayo nemibhalo.
Imininingwane mayelana nokuqokwa
Ngenkathi ulungiselela umhlangano nommeli wakho wesahlukaniso, kubalulekile ukuthi uxoxe ngezinto eziningi ezibalulekile nomuntu wakho oshade naye. Ngabe ulibona kanjani ikusasa ngemuva kwesehlukaniso maqondana nekhaya lakho elihlanganyelwe, isimo sezimali kanye nezingane zakho ezingenzeka? Uma ngabe sekuvele kube nesivumelwano ngaphambi kokuqokwa, ngokwesibonelo maqondana nendlu noma ukunakekelwa kwansuku zonke nokuxhumana nezingane zakho, lapho-ke ummeli ohlanganyelwe wedivosi angaqopha kalula futhi ngokushesha lezi zivumelwano esivumelwaneni sesehlukaniso kanye nohlelo lwabazali.
Akunakwenzeka yini ukuthi nixoxe futhi nenze amalungiselelo ahlanganyelanayo nalowo obethandana naye? Ngemuva kwalokho ungaxhumana nommeli wakho wesehlukaniso ozolwela ukuthola umphumela ongcono kakhulu ongawathola. Kuleso simo, kusalulekile, lapho ulungiselela umhlangano nommeli wakho wesahlukaniso, ukuze uzibuze ukuthi yiziphi izingqinamba ezibalulekile ongathanda ukuzixazulula futhi kanjani. Isibonelo, ungathanda ukuqhubeka nokuhlala endlini unakekele izingane zakho nsuku zonke? Kuleso simo ummeli wedivosi angakutshela ngqo ukuthi yini engahle futhi okufanele ihlelwe nokuthi ungawathola kanjani la malungiselelo.
• Ingabe ungumuntu ngamunye?
• Udinga izeluleko zomthetho?
• Ngabe ufuna ukuqonda okusobala mayelana nesikhundla sakho sezomthetho?
YENZA ISITOLO SAMANSI MANJE!
Xhumana nathi ngqo ngenkinobho.
Sizokushayela emuva ngokushesha okukhulu.
Imiphi imibhalo okufanele ngiyilethe?
Kubalulekile ukuqoqa amadokhumenti athile abalulekile futhi uwalethe lapho uzoqokwa nommeli wedivosi. Okokuqala, udinga ukuletha incwadi yakho yomshado noma isivumelwano sokuhlala ndawonye futhi okungenzeka kube nethenda ngesivumelwano sezezimali. Le mibhalo ihlinzeka abameli ngokuqonda okungokwakho nabalingani bakho bangaphambili ngesimo sezomthetho futhi yindawo yokuqala yezivumelwano ezengeziwe. Ngabe wena nomlingani wakho wangaphambili ninayo (irenti) indlu ndawonye? Uma kunjalo, uzodinga futhi ukuletha incwadi yakho yobambiso noma isivumelwano sokuqasha nawe emhlanganweni. Isimo sakho sezezimali siyasebenza futhi esimeni sesehlukaniso. Unganikeza ummeli wakho wedivosi ngesibukezo sama-akhawunti akho asebhange kanye / noma ama-akhawunti okonga, izitatimende zonyaka kanye nembuyiselo emithathu yokugcina engenayo. Futhi ekugcineni, imininingwane mayelana nezimpesheni zakho, imishuwalense nanoma yiziphi izikweletu ongazifakile nakho kubalulekile.
Lapho izingane zibandakanyeka, kubalulekile ukuthi nezidingo zazo zibhekwe futhi. Siyaqiniseka ukuthi lezi zidingo zibhekwa ngangokunokwenzeka kumthethonqubo. Abameli bethu besahlukaniso bangakha icebo lokuba ngumzali kanye nawe lapho ukusatshalaliswa kokunakekelwa kwezingane zakho ngemuva kokunqunywa kwesehlukaniso. Singasho futhi ukubala inani le-alimony yezingane okufanele ikhokhwe noma yamukelwe.
Ngabe sewuhlukanisile futhi unombango mayelana, ngokwesibonelo, ukuthobela umlingani noma i-alimony yengane? Noma unesizathu sokukholelwa ukuthi umlingani wakho wangaphambili manje unezimali ezanele zokuzinakekela? Abameli bethu besahlukaniso bangakunikeza nosizo lwezomthetho ezimeni ezinjalo.
Inkampani eyakho nesehlukaniso
Ingabe unayo inkampani yakho futhi uyahlukanisa? Lapho-ke kufanele ucabangele izici ezingeziwe. Imibuzo abazoyihlaziya abameli bethu besahlukaniso kanye nawe ifaka:
• Ingabe unamasheya?
• Ngabe amasheya lawo angawomphakathi wesakhiwo?
• Kwenzekani enkampanini yakho?
• Yimiphi imiphumela yokwahlukana kwenkampani yakho?
• Iyini imiphumela yentela?
Indlela yomuntu siqu nesiqondisi
Ngenkathi sincoma ukulungiswa okuthile ngaphambi kokubonisana nommeli wakho wedivosi, thina Law & More qondisisa ukuthi isehlukaniso wumcimbi osifinyelela kude empilweni yakho nokuthi ngeke ukwazi ukucabanga nokuveza ikusasa lakho ngqo ngemuva kwesehlukaniso. Yingakho Law & MoreAbameli besahlukaniso banendlela yomuntu siqu futhi sihlangene nawe futhi mhlawumbe nomlingani wakho wangaphambili sizonquma isimo sakho sezomthetho phakathi nengxoxo ngokususelwa kuncwadi. Sizokhipha umbono wakho nezifiso zakho ngekusasa. Abameli besahlukaniso se Law & More ochwepheshe emkhakheni wabantu nomthetho womndeni futhi bayakujabulela ukukuqondisa, mhlawumbe kanye nomlingani wakho, ngenqubo yesehlukaniso.